Khabiirka Kala Duwan: Liiska Kala-reebitaanka Gudbinta
Mid ka mid ah arrimaha ugu caansan ee baaritaannada falanqaynta ayaa ah in dadku aanay helin fikrad ah liiska liisaska ka-reebitaanka gudbinta iyo sida loo sameeyo isticmaalka ugu wanaagsan. Ugu horreyntii, waxaan u baahannahay inaan ogaano waxa liiskan ka-saarista liisaska. Marka Google uu soo saaray bogga ugu dambeeya ee Google Analytics, waxa uu sheegey in liiskan lagaga saarayo liiska gudbinta ee lagu darey Analytics - how to setup a small office wireless network. Waa sahlan tahay qof kasta oo isticmaala liiskaas; waa inaad ka heshaa goobaha hantida. Marka ugu horeysa, waa inaad u tagtaa qaybta maamulka oo aad tagtaa macluumaadka raadraaca halkaasoo liiska rikoorka loo gudbiyo. Waa inaad gujisaa badhanka farriinta u gudbinta iyo guji barta badhanka abuurista.
Nik Chaykovskiy, oo ah Semalt Maareeyaha Guusha ee Macaamilka, ayaa sheegaya in ay jiraan dhibaatooyin tiro badan oo lagu xallin karo liiska ka-reebitaanka gudbinta. Sidaas u isticmaal inaad u xalliso dhibaatooyinka soo socda:
Is-u-diritaan waa mid ka mid ah arrimaha ugu caansan uguna muhiimsan ee Google Analytics. Si loo xalliyo dhibaatadan, waa inaad ku dhejisaa warbixinta gudbinta oo aad gashaa website-kaaga. Halkan waxaad kuxiran kartaa falanqaynta iyo xisaabinta sida shuruudahaaga
Qalabka Saddexaad ee Xisbiga
Marka ay timaaddo isticmaalka qalabka dhinac saddexaad, waa inaad fulisaa hawlo badan." Haddii aad isku dayayso inaad ku hagaajiso PayPal, Freshdesk, iyo Eventbrite websaydhkaaga, hubso in ay u muuqdaan kuwo isku mid ah Si toos ah ayaa loogu daraa, deyntu waxay si toos ah ugu socotaa koontadaada shakhsi ahaaneed. Isbarbardhigga waa in aan lagu qorin boggaga internetka ee sadexaad. Tusaale ahaan, haddii aad leedahay bog internet ka mid ah maareynta dhacdooyinka ama sawir qaadaha, waa inaad isku deysataa Eventbrite iyo saxiixa Marka aad booqato boggaga internetka ee isku day inaad amar bixiso, waxay si fudud uugu soo diri doonaan xisaabta koontadan, taasoo ugu dambeyntii u imaan karto bangigaaga.
Sidee Ayuu Caawin Karaa
Waa khasab in la isticmaalo liisaska ka-reebitaanka gudbinta, iyada oo aan lahayn, ma heli kartid tayada booqashada tayada boggaaga. Haddii aadan rabin qaar ka mid ah isku xirka si ay u abuuraan gaadiidkaaga goobtaada, markaa waa inaad joojisaa doorashadan ama ka reebtaa domain ka liisaska liiska gudbintaada. Aynu u maleyno in qaar ka mid ah martida ay yimaadaan website-kaaga iyada oo loo marayo warbaahinta bulshada, Twitter ama Facebook, waxaadna dooneysaa in ay u guuraan boggaga saddexaad ee xisbiga. Sidaa darteed, waa inaad ku dartaa liiska rikoorka lagu soo gudbiyo si aad u bilowdo cashar cusub oo aan la bilaabin.
Liiska Ka-Hortagga Gudbinta wuxuu xaddidi karaa kalfadhigaaga iyo lambarka martida. Haddii aad rabto inaad ogaato nooca booqdayaashu soo gaadheen goobtaada iyo waxa ay yihiin ilaha, waa inaad sameysataa codadka raadraaca cross-domain raad raac iyo galaan bogagga internetka ee boggaga kala duwan. Waa wax dhif ah marka bogga liisaska ka-saarida liiska gudbinta uusan kuu ogolaan doonin inaad aragto nooca booqdayaashu u imanayaan website-kaaga. Waxaad la socon kartaa oo diiwaan gelin kartaa waxqabadyadooda, sidaas awgeed waxay ka hortageysaa IP-yada aan khatarta lahayn ama khatarta ah ee kuu diraya gaadiidka.
Wakhti yar, waxaad arki kartaa in boggaga internetka uu soo booqdo, laakiin imaanshahooda waa la joojin doonaa marka aad dejinayso goobaha iyo dadkaas marnaba iman doonin goobtaada